IBafana yenza amalungiselelo okugcina njengoba izobhekana neBlack Stars | Scrolla Izindaba
IBafana yenza amalungiselelo okugcina njengoba izobhekana neBlack Stars
IBafana Bafana yenza amalungiselelo ayo okugcina njengoba izobhekana neGhana e-FNB Stadium ngehora le-6 ntambama ngoLwesine emdlalweni wayo wokuhlungela i-Africa Cup of Nations Group C.
Umdlali wasesiswini uBongani Zungu uzophuthelwa umdlalo ngenxa yemikhawulo yokuhamba yase-Scotland. Iqembu lakhe, iRanger alizange limkhulule ngemuva kokuthi i-FIFA ivumele amakilabhu ukuthi enqabe ukudedela abadlali abazodlala eqenjini lesizwe.
“Ngeke ngikwazi ukuya eNingizimu Afrika ukuyomela izwe lami. Ngibafisela inhlanhla abafana,” kusho uZungu ekhasini lakhe le-Twitter.
Izindaba ezimnandi ukuthi uZungu, owake wadlalela iMamelodi Sundowns uzoba khona emdlalweni wokugcina ka-Group C uma sebebhekene neSudan e-Khartoum ngeSonto.
“UZungu uqinisekisiwe ukuthi uzoba khona,” kusho udokotela weqembu leBafana, uThulani Ngwenya.
Uthe, uThulani Serero kanye noDean Furman nabo bayaqinisekiswa ukuthi bazoba khona.
Ekhuluma ne-TimesLive mayelana noKeagan Dolly, uNgwenya uthe: “Sisenethemba futhi kunezingxoxo ezenzekayo.”
UNgwenya uthe, bazozama ukuthi iziphathimandla zase-France zikhulule umdlali wase-Montpellier ukuze akwazi ukudlala kulo mdlalo ose-Khartoum.
IBafana akusilona kuphela iqembu elihlushwe yisinqumo se-FIFA. IGhana nayo izobe ingenabo abadlali bayo baphesheya kwezilwandle.
Amagama abadlali abazobe bengekho kubalwa ukaputeni u-Andre Ayew we-Swansea City kanye nomfowabo uJordani we-Crystal Palace. Umdlali wasesiswini we-Arsenal uThomas Partey naye naye uzophuthwa umdlalo wabo neBafana.
IBafana yagcina ukudlala ne-Black Stars ngoLwezi kowe-2019 emlenzeni wokuqala weqembu e-Ghana.
IGhana yawunqoba lowo mdlalo ngamabili eqandeni kanti iBafana ingathanda ukuziphindiselela ngoLwesine bese inyukela esicongweni futhi ibe isondela ekungeneleni ukuyodlala e-Cameroon ngonyaka ozayo.
Umthombo wesithombe: @paybet
Umthombo wezindaba i-Scrolla, ushicilelwe yi-Olduvai Pty, ebhalise nemithetho yokuziphatha nokusebenza ngendlela efanele, ngokushicilela izindaba eziyiqiniso, ezinembayo, nezinobulungiswa. Uma singahambisani nemithetho yokuziphatha ngendlela efanele, uma kungakapheli izinsuku ezingama-20 kushicilelwe lowo mbhalo, sicela uthintane noMmeli Womphakathi ku-011 4843612, nakwi-fax ethi: 011 4843619. Ungathintana Nomphathi wamacala [email protected]dsman.org.za noma ufake isikhalazo kumthombo wezindaba i-Scrolla ku: www.presscouncil.org.za